Sales Engineer ($ 250 ~ $ 300) Code - 15063
The recruiting company is Engineering Company located in Alone Tsp. - Engineering Degree or Any Graduate with Engineering Diploma or Certificate. - At least (2) years experience in related field - Must have ...
Posted 01/08/2017 Ahlone , Yangon Salary: 300,000 - 499,999 Experience:1-3 Years
Logistic Officer ($300) (Negotiate) Code...
ကျောက်တံတားမျြို့နယ်တွင်ရှိသော Engineering ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှဝန်ထမ်းခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ - တက္ကသိုလ်တခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - Import Documentation နှင့်အတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။ - Foreign partner များအား Email ဖြင့်...
Admin/HR Executive ($200 ~ $300) Code-15...
ကျောက်တံတားမျြို့နယ်တွင်ရှိသော Engineering ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှဝန်ထမ်းခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ - တက္ကသိုလ်တခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။